यौ"न सम्पर्क लामो समयसम्म कसरी टिकाउने ? जानीराखौ - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यौ”न सम्पर्क लामो समयसम्म कसरी टिकाउने ? जानीराखौ
लामो समयसम्म सेक्स गर्न या आफ्नो विर्यलाई लामो समयसम्म टिकाउने विभिन्न तरिकाहरु छन् जसले तपाईलाइ सन्तुष्टि दिलाउन सक्छ। आफ्नो सेक्स लाइफलाई सुखले भरिपुर्ण बनाउन यो कुराहरु तपाईले जान्न निकै आवश्यक छ। पुरुसलाई जस्तै महिलालाई पनि योन सम्पर्क गर्ने ईच्छा निकै हुन्छ। तर महिलाहरु यस्तो कुरा अरुसँग शेयर गर्न निकै हिचकिचाउँछन। एक महिला र पुरुषको लागि शारिरीक सम्बन्ध माया र भरोसामा टिकेको हुन्छ।
हिन्दी टिप्स अनलाइनका अनुसार यो कुरा निकै जरुरी छ कि शारीरिक सम्बन्ध दुबैको सहमतिमा होस। लामो समय सम्म सेक्स गर्न के गर्ने भन्ने बारे तल केही टिप्सहरु छन।
१.मूड बनाउनुहोस् :
सेक्स प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि एक प्रकारको सेक्सी वातावरण अथवा मूड बनाउन आवश्यक छ । सेक्स गर्ने ईच्छा शारीरिक रुपले मात्र नभएर मानषिक रुपले आफ्नो भित्र पनि जगाउनु पर्दछ । केही सेक्सी कार्यक्रमहरु हेर्नाले दिमागमा केहि केमिकल परिवर्तन हुने गर्दछ जसले सेक्सको तिव्रतालाई बढाउँछ । तपाई आफ्नो सेक्स ईच्छाको बारेमा आफ्नो पार्टनरसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ ।
२.बिना कुनै चिन्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् :
धेरै मानिषहरु सेक्सको क्रममा आफ्नो विर्यलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछन् । स्वभाविक रुपमा उनिहरु सेक्सको पुरा आनन्द लिन पाउँदैनन् । सेक्सको क्रममा केहि चिन्ता नलीइ आनन्द लिन जरुरी छ । आफ्नो साथीलाई अँगअँगँमा छोएर चुमेर यो पललाई निकै रोमान्चक बनाउन आवश्यक छ । यसले तपाईहरुको मस्तिस्कमा पनि प्रभाव पर्दछ र तपाइकोे शरीरले सेक्स प्रक्रियामा पूरा आनन्द लिँदछ ।
३.औषधि कम लिनुहोस् :
यस्ता निकै औषधिहरु हुन्छन् जस्को सेवन गर्नाले शरीरलाई धेरै साईड इफेक्ट पुग्दछ । यसले तपाइको सेक्स लाईफमा पनि खतरा पुग्दछ । कति औषधिले त तपाइको सेक्स लाईफ पुरै बर्बाद गर्दिन्छ ।
४.यौन अपिल :
कोही कोही मानिषहरु योन सम्बन्ध राख्न त चाहन्छन् तर आफ्नो साथीलाइ बहकाउन भने सक्दैनन् । आफ्नो साथीको मनमा सेक्स ईच्छा जगाउन प्रयाप्त साधन हुँदैन उनीहरुसँग । आफ्नो साथीलाई इम्प्रेस गर्न सुन्दर र कामुक भित्रि वस्तुको प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।
५.हल्का चुम्बन :
कतिपय समयमा आफ्नो साथीको ओठमा विस्तारै चुम्बन गर्नाले पनि उनको योन ईच्छा जाग्दछ । सेक्स गर्ने ईच्छालाई केही समयको लागि भुल्नुहोस् र एक अर्कालाई सक्दो र पुग्दो चुम्बन गर्नुहोस् । यसले गर्दा दुवैको शरिरमा र्फुति आउनुको साथै मनमा धेरै प्रकारको ईच्छाहरु जाग्दछ ।
६.खराब बानिदेखी टाढा रहनुहोस् :
यदि तपार्इं लामो समयसम्म सेक्सको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो सबै खराब बानिदेखी छुट्कारा पाउनुहोस् । ड्रग्स, रक्सी, धुम्रपानको छेउ नै नपर्नुहोस् । यी चिजहरु स्वास्थ्यको लागी हानिकारक छन् भने यसले विर्यको प्रक्रियामा रुकावट पनि ल्याउन सक्छ ।
७. सेक्स पोजिसन बदल्दा फाइदा :
सेक्सको मज्जा लामो समयसम्म लिन चाहनुहुन्छ भने यो अर्को तरिका अप्नाउनुहोस् । सेक्स पोजिसन र ठाउँ बेला–बेला बदल्नुहोस् । जब तपाइ समय समयमा अलग–अलग तरिकाले सेक्स प्रक्रिया जारी राख्नुहुन्छ, तब यसमा रोमान्स भरिपुर्ण हुन्छ र तपाइको साथीको रुचि अझ निकै बढ्दछ ।